နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Starhub : Internet on Mobile အကြောင်း သိကောင်းစရာ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:14 PM
khin oo may July 8, 2009 at 3:07 PM
maylay July 8, 2009 at 3:37 PM
ထိုင်း က ကုန်ကျနှူန်း ဘာလို့ မပါလဲ တို ကြီး။ ပြန်တင်ပေးပါ။(စတာပါ)
ရွက်လွင့်ခြင်း July 8, 2009 at 3:55 PM
khin oo may July 8, 2009 at 4:21 PM
ဒေတာကို ၁၀ မက်ဂါဘိုဒ် ဆိုတာ ဘယ်လိုအသုံးမျိူးကိုရပါသလဲ.
ခက်တာက ဒေတာ ဆိုတဲ့အသုံးအနှူံဘဲ. အီးမေးလကို သွားစစ်တယ် ခဏဘဲပြန်ထွက်လာတယ်ဆို၇ရင်ဒေတာ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ ဘလော့ကိုစစ်ကြည့်တယ်။ ခဏ တဖြုတ် သုံးမိတယ်။ ဒေတာ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ ဒေါင်းလုပ်သိတ်မလုပ်ဘူး. စာနဲနဲဘဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒေတာ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ.။
အစမ်းကာလမှာတော့ တစ်ခါ မှ မသု့းဘူးတဲသူတစ်ယောက်အတွကဆိုရင် ၁.ခ- MaxMobile Value ဘဲကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အလယ်အလတ် usage ပေါ့။
အဲသလို စမ်းသုံးပြီး ပိုသုံ့းချင်လာလို့မှ ပလန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရပါမလား. အစကတည်းက ဘယ်လောက်ပမာဏ ဘယ်နစ်လ ဆိုပြိးစာချုပ်ထားရမှာလား။
khin oo may July 8, 2009 at 4:23 PM
နစ်က သွားချိတ်ဘို့ဆိုတော့ တစ်ပလန်ယူထားပေမဲ့ ဒီ လိုမျိုးသုံးချင်သေးရင် ထပ်ချိတ်ရဥိးမှလား. မွဲတော့မှာဘဲ အိမ်က ကွန်ပြူတာလိုင်းက တစ်ခါ. ဖုံ့းကအင်တာနက်ဘိုးက တစ်ခါ ရူံ့းမှာခိုးကြည့်ဘို့က တစ်ခါ။
မေဇင် July 8, 2009 at 4:29 PM
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ဟဲဟဲ...လောလော ဆယ်ဖုန်းလဲ ချင်လို့...ဒါပေမယ့်2နှစ်စာချုပ်နဲ့ မို့ ဘာလုပ်ရမယ် မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်..။2နှစ်ပြည့်ခါနီးပြီ...။
khin oo may July 8, 2009 at 4:33 PM
Ko Boyz July 8, 2009 at 4:33 PM
ဒေတာ ပလန်က ၃ လ အနည်းဆုံး ယူရပါတယ်။ ဒေတာတွေ အသုံးများလို့ ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာ မပူပါနဲ့ အများဆုံး ပေးရတာ ၃၆.၃၈ ကျပ်ထဲပါ။
khin oo may July 8, 2009 at 4:36 PM
အဲဒါဆိုရင်တော့ ရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုံးပလန်ဘဲ ရွေးတော့မယ်။ ရုံးမှာ သိတ်လဲထိုင်ရတာမဟုတ်တော့ ဖု့းံကလေးနဲ့ ခိုးကြည့်လို့ရင်မဆိုးပါဘူး။
Ko Boyz July 8, 2009 at 4:49 PM
လက်ရှိဖုန်းပလန်မှာပဲ MaxMobile Value ကို VAS (Value Added Service) အနေနဲ့ ထည့်လျှောက်ရုံပါ။ လုပ်တတ်ရင် စတားဟဘ်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ကိုယ်တိုင် သွင်းလို့ ရပါတယ်။ ဘီလ်ကတော့ စထည့်ပြီး နောက်လမှသာ ပါလာမှာပါ။
မလုပ်တတ်ရင် ဆားဗစ်စင်တာမှာ သွားထည့်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ၅မိနစ် မကြာပါဘူး။
ကြည် July 9, 2009 at 11:53 AM
တခါတလေ ဖွင့်ရင် ခဏနေ ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုပြီးပြန်ပိတ်သွားတယ်။ ဖွင့်မရ မန့်မရဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ကျတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျား။
မောင်မောင် July 17, 2009 at 7:51 PM
မိုဘိုင်း အင်တာနက် က ဖုန်းဆားဗစ်သမားတွေ အတော်ကိုက်တဲ့ အလုပ်ပါဗျာ။
ကျွန်တော် ထိုင်းမှာ နေခဲ့စဉ် ၂၀၀၄ လောက်ကတည်း က
GPRS နဲ့တွဲပြီးတော့ ကွန်ပြူတာ နဲ့ ချိတ်သုံးတယ်။
ဈေးကြီးတယ်။ မြန်နှုန်းက လဲ နှေးပါတယ်။
ခုတော့ ၂၀၀၉ ဆိုတဲ့နှစ်မှာ ပိုကောင်းတဲ့ပိုမြန်ဆန်တဲ့ speed တွေရနေကြပြီ။
Smart Phone တွေ 3G phone တွေ အားလုံးက လဲ အဲဒီ Wifi သို့ မဟုတ် GPRS,EDGE နည်းပညာတွေ နဲ့ သုံးလာကြတော့ တယောက်နဲ့တယောက် မျက်နှာကြည့်ပြောလို့ ရနေပါပြီ။
ခုလဲ ကျွန်တော် မိုဘိုင်းအင်တာနက် သုံးနေပါတယ်။
အိန္ဒိယ မှာ ကတော့ နေရာတိုင်း နက်ဝေါ့ရှိတော့ ဘယ်ရောက်ရောက် အင်တာနက် အတွက် မခက်တော့ပါ။
အယင် က မြို့တမြို့ ရောက်ယင် အင်တာနက် ကဖေး ရှာရတာ အတော် ခက်ပါတယ်။ ခုတော့ ဖုန်း ကနေ ပြီး ကွန်ပြူတာ ကို ချိတ်လိုက်ရုံ နဲ့အင်တာနက် ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။
ဗဟုသုတတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကို Boyz ရေ